Ihowuliseyili 48V 500W Super eyomeleleyo yexabiso eliphantsi ibhayisekile yentaba yoMvelisi kunye noMthengisi | IIMI
I-48V 500W Super eyomeleleyo ngexabiso eliphantsi ibhayisekile yentaba
Ibhayisekile yombane i-ELECTO yi-e-bhayisekile enamandla enemilo entle yesakhelo sombane. E-ibhayisekile Kulula kakhulu ukuba ukusebenza. I-ELECTO ixhotywe ngemoto enamandla ye-500W ye-bafang, kwaye idibene nomlawuli ohlakaniphile, i-26 * 4.0 FAT kunye nevili ezinamandla. Ibhetri yi-48V 14AH ekwaziyo ukuhamba umgama ongaphezulu.
Amandla anamandla angama-48V 500W ngasemva kweemoto ene-Shimano 7 Gears
I-ELECTO ikunye ne-48V 500W ngasemva kweMoto ibonelela ngenkxaso enamandla kakhulu kwiimeko ezahlukeneyo, ezinje ngemigama emide, ngokuchasene nomoya okanye ngokuchasene namathambeka amade. I-500W yangasemva kweHub Motor inamandla ngokwaneleyo kwaye ithembekile. Ngokudibeneyo ne-Shimano 7 gear kunye nenkxaso yombane ohambelana. Le yibhayisekile ekhwele kuwe.
IziQhoboshi zeDiskhi eziphezulu
Iziqhoboshi zangaphambili nezingasemva zediski ye-ELECTO zifuna ulondolozo oluncinci. Iziqhoboshi zeediski zihlala zinamandla ngakumbi kwaye ziyeke nakweyiphi na into oyifunayo.
I-Crankset enamandla ngeRatio enkulu
I-ELECTO ixhotyiswe ngekhonkrithi enamandla enamandla engasindi kwaye yomelele. I-Aluminium Alloy crankset iyachasa ukurusa, kwaye ngama-42amazinyo enza ukuba abakhweli bonwabele umlinganiso omkhulu. Igcina amandla akho esandla.
Umboniso omkhulu weLcd ngokukhanya okungasemva
Kwiphathi yokubamba ngumboniso weLCD apho inkxaso yombane inokulawulwa ngeqhosha ngalinye. Izikhundla zenkxaso ze-PAS zinokusebenza ngokulula ngamaqhosha amabini. Umboniso ukhanyisiwe kwaye kulula ukusebenza. Ngokucinezela iqhosha ungafunda ulwazi oluninzi, njengesantya, umgama kunye nokusetyenziswa kwebhetri Umboniso unonxibelelwano lwe-USB ngasemva. Oku kukunika ithuba lokutshaja ifowuni yakho okanye ukukhangela xa uqhuba.
Umlawuli oSebenzayo 48V 20Ah (Uqhubeko lwangoku oluphezulu) i-18 transistor
I-500 Watt yamagama, iTorque 80NM
Prowheel, zakha ingxubevange, 170mm Ubude, 42 Ukubola Steel Chainring
Egqithileyo Ukusebenza okuphezulu kokumiswa okupheleleyo kwebhayisekile yentaba
Okulandelayo: I-20inch efihliweyo yeBattery Light Light Electric Bike Bike